XOG: 4-ta Mushrax ee Wareega labaad u gudbaya iyo Wararkii ugu danbeeyay ee Ololaha Doorashada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: 4-ta Mushrax ee Wareega labaad u gudbaya iyo Wararkii ugu danbeeyay ee Ololaha Doorashada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ololaha Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa galay maalintii ugu danbeysay iyadoo Berri oo Axad ah 15 May, 2022 lagu wado in la doorto Madaxweyne cusub.
Saacadihii ugu danbeeyay waxaa caasimadda Muqdisho ka socday ololeyaashii ugu danbeeyay ee doorashada, waxaana soo baxay isbaheysiyo cusub, iyadoo ay socdaan shirar muhiim ah oo musharixiinta ay codad ku raadsanayaan.
Laba musharax ayaa ka haray tartanka xilka madaxweynaha, kuwaas oo kala ah: C/kariin Xuseen Guuleed iyo Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo hadda taageeraya Musharax C/raxmnaan C/shakuur Warsame, inkastoo aysan miisaan weyn ku lahayn doorashada, haddana niyad ahaan ayey muhiim u yihiin musharaxa oo taageero ka helay beeshiisa.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in xildhibaanno ka tirsan Beelaha Dir iyo Digil iyo Mirifle ay taageero u muujiyeen Musharaxa Xasan Sheekh Maxamuud oo hardan ugu jira inuu wareegga labaad gaaro.
Musharax Maxamed C/llaahi Farmaajo oo taageerayaashiisa ku ololeynayaan shaqsiyaad iyo dad kooban oo degaano kala duwan muuqaallo laga soo duubay ayaa rajadiisa sii yaraaneysaa, waxaana ka sii tegaya xildhibaanno hore u taageersanaa.
Mushraxa Shariif Sheekh Axmed oo xalay xaflad weyn ku qabsaday Muqdisho ayaa taageero ka helay xildhibaanno cusub. Khadiijo Maxamed Diiriye oo hore u sheegtay inay taageereyso dib u doorashada Farmaajo ayaa xalay shaacisay inay is-bedeshay oo dhinaca Musharax Sheekh Shariif kasoo jeesatay.
Ololaha Doorashada waxaa si weyn ugu dhex jira madaxda maamul Goboleedyada dalka oo dhammaantooda ku sugan magaalada Muqdisho, waxayna kala taageerayaan musharixiinta waaweyn ee is haya.
Kulan naadir ah ayaa xalay dhex maray madaxweyne ku xigeenada Galmudug iyo Jubbaland oo ay wehliyaan xildhibaanada Beesha Farmaajo ee kasoo baxay Galmudug iyo Jubbaland, waxaana markii ugu horeysay is hor fariistay siyaasiyiin dagaal u dhaxeeyay 5-tii sano ee lasoo dhaafay.
Xildhibaannada taageersan Farmaajo ayaa dadaalkooda ugu weyn ku bixinaya musharaxa ay Qorshaha labaad ka dhigan doonaan (Plan B), iyadoo laga cabsi qabo inay u kala jabaan Musharixiinta Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Kheyre.
Waxa kaloo dhici kara lama filaan ah in musharaxa soo socda uu ciriirsado wareegga labaad:
6- C/raxmaan C/shakuur Warsame.
Previous articleMadaxweyne Cusub oo Berri la Dooranayo iyo Bandow lagu soo rogay Caasimadda Muqdisho
Next articleBandhigii Musharax Sheekh Shariif iyo Xaqiiqo oo laga ogaaday Ololihiisa Doorashada